တရားထိုငျတာ , ဘုရားစာရှတျတာ နဲ့ ဥပုသျစောငျ့တာ ဘယျဟာကပိုအကြိုးမြားလဲ – Youth Bar
တရားထိုငျတာ , ဘုရားစာရှတျတာ နဲ့ ဥပုသျစောငျ့တာ ဘယျဟာကပိုအကြိုးမြားလဲ
အောကျစဖို့ဒျ ဆရာတျော ဒေါကျတာဓမ်မသာမိ “သငျနှငျ့ ကြှနျုပျတို့ အတှကျ ဗုဒ်ဓ၏ ဦးနှောကျအတှေးအချေါမြား (ဒု) (Buddha Brain for You and Me) ” တရားတျောမှ ကောကျနှုတျ မြှဝေ ပါသညျ။
မေး ~ အရှငျဘုရား တရားထိုငျလို့ ရတဲ့ ကောငျးကြိုးနဲ့ ဘုရားစာရှတျ ဖတျပွီး ဘုရားရှိခိုးတာ ၊ ဥပုသျစောငျ့တဲ့ ကောငျးကြိုးနဲ့ ဘယျဟာက ပိုပွီး စိတျငွိမျး ခမျြးမှုကို ပိုရ နိုငျပါ လဲ ဘုရား။
ဖွေ ~ ဘုနျးဘုနျးက အဲဒီလို မနှိုငျးယှဉျ တတျဘူး နှိုငျးယှဉျပွီးတော့ ကွညျ့တဲ့ အလအေ့ထ လုပျမထားဘူး ကိုယျ့ကိုယျကို လညျးပဲ သူမြားနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီးတော့ ကွညျ့တဲ့ ဟာမြိုး မလုပျ ဘူးပေါ့။အဲလို လုပျမယျ့ အစား complementary approach ဆိုတာ ဥပုသျစောငျ့တဲ့ ဟာနဲ့ တရား ထိုငျ တဲ့ဟာ ဘယျလို အပွနျအလှနျ အကြိုးပွုတုနျး ဘုနျးဘုနျးက အဲလို တှေးတယျ တဈခုစီ ဘုနျးဘုနျးက မတှေး ဘူး။
မဂ်ဂငျ ၈-ပါးကို ဘုနျးဘုနျး ဒါလေး ဆှဲပွ ခငျြတယျ ဗုဒ်ဓဘာသာရဲ့ အတှေးအချေါက ဒီထဲမှာ အကုနျပါတယျ ဒီ ဓမ်မစကွာ ထဲမှာ အကုနျ ပါတယျ
အဲဒီ စကွာက သူက အဲဒီ wheel လေ တဈခု တညျးပဲ ဒါပမေဲ့ – အဲတဈခု တညျးက အရညျအသှေး ဘယျနှဈခုကို integrate လုပျ ထား တုနျး ပေါငျးစပျ ထားတုနျး ဆိုတော့ ၈ ခု ပေါငျးစပျ ထားတယျ။အဲတော့ သမီးက မေးတဲ့ အထဲမှာ ဥပုသျစောငျ့တာ နဲ့ တရားထိုငျတာ ဘယျ ဟာက ပိုကောငျးလဲ ဆိုတာ ဘုနျးဘုနျး အဲလို မတှေး တာက ဘုနျးဘုနျးက ဒီအတှေးတှေ အတိုငျး ကိုယျ့ကိုယျ ကို train လုပျ ထားလို့။
ဥပုသျစောငျ့ တာကို အကနျ့တဈကနျ့ လို့ ဘုနျးဘုနျးက ယူဆ တယျ ဘုရားစာရှတျတာကို အကနျ့တကနျ့လို့ ယူဆတယျ တရားထိုငျ တာကို အကနျ့တဈကနျ့ လို့ ယူဆ ထားတယျ။အဲလို အကနျ့တှေ မြားလာရငျ ကောငျးတဲ့အ ကနျ့တှေ မြားလာရငျ ဒီလူက သူဘာပဲ လုပျလုပျ အကု နျလုံး အဲဒီ အရညျအသှေးတှကေ အခငျြးခငျြး ဒီလို လကျ ၅ – ခြောငျးလို .. တခြောငျး နဲ့ တခြောငျး အထောကျအကူ ဖွဈတယျပေါ့။
အဲ တော့ – ဥပုသျစောငျ့တဲ့ လူကလညျးပဲ သူရဲ့စိတျကို သူဆုံးမ တာပါပဲ , train လုပျတာပါပဲ။
အစားအသောကျနဲ့ ပတျသကျတာတှေ နောကျ music နဲ့ ပတျသတျ တာတှေ အဲဒါ မြိုးတှေ သူ့စိတျကို သူ train လုပျတယျ Destruction တှေ မမြားအောငျ တရားထိုငျတဲ့ အခါလညျး ဒါပဲ လုပျတာပဲ။စိတျထဲမှာ Destruction တှေ သိပျပွီးတော့ မမြားအောငျ ကိုယျ့စိတျကို ထိနျး နိုငျအောငျ လုပျတာ ဒါကွောငျ့ ရညျရှယျ ခကျြခငျြး တူ တယျ ။ဒါကွောငျ့ ဘုနျးဘုနျး အနနေဲ့ သမီးကို ဘယျလို တှေးစခေငျြး တုနျး ဆိုတော့ ဘယျဟာက ပိုကောငျးတယျဆိုပွီးတော့ တှေးတာ ထကျ ဘယျဟာက ဘယျဟာနဲ့ သူတို့ အခငျြးခငျြး အထောကျအကူ ဘယျလိုဖွဈသလဲ အဲဒါတှေး စခေငျြ တယျ ။
အဲဒီ approach ကို အင်ျဂလိပျလို Integral Approach အရငျတုနျးကလေ – မငျးတုနျးမငျးခတျေ တုနျးက ဒါနက ပိုအရေးကွီး တယျ တခြို့ပွောတာ တခြို့ကပွော တယျ မဟုတျဘူး ။သီလက ပိုအရေးကွီးတယျ တခြို့က ပွောတယျ တခြို့က ဘာဝနာ ပိုအရေးကွီး တယျ ယောမငျးကွီး ဦးဖိုးလှိုငျက ဘာဝနာ တဈခုပဲ အရေးကွီးတယျ ဆိုပွီးတော့ ဒါန နဲ့ သီလ ကို သူက ပယျလိုကျ တယျ။အဲဒါကို မဟာဝိသုဒ်ဓါရုံ ဆရာတျောကွီးက ပွနျပွီးတော့ရေးပွီး မဟုတျဘူး ဒီသုံးခု ဘယျလို အကြိုးပွုတယျ ဆိုတာ ပွနျပွီးတော့ ရေးတယျ ။
ဗုဒ်ဓရဲ့အတှေးအချေါ ဆိုလိုတာက ဗုဒ်ဓရဲ့အတှေးအချေါက အရညျအသှေးတှေ အမြားကွီး ရှိတဲ့နရောမှာ အရညျအသှေးတဈခု နဲ့ တဈခု ပွိုငျအောငျ မလုပျဘဲနဲ့ အဲဒီ နညျးကို မရှာ ဘဲနဲ့ ။အဲဒီ အရညျအသှေးတှေ အားလုံး စုပေါငျးပွီးတဲ့ အလုပျလုပျတဲ့ အခါ ဥပမာလေး တဈခုပွောမယျဆိုရငျ လကျငါးခြောငျး သူတို့က ပွိုငျကွ တယျတဲ့။လကျမ သူက နုလုံးသားနဲ့ အနီးဆုံး ပဲတဲ့ ဒါကွောငျ့ သူက ပိုအရေးပါ တယျတဲ့ လကျညှိုးက – အဲဒါ မခံခငျြဘူး စကားမြား မနနေဲ့တဲ့ အမိနျ့ပေးရငျ ကြုပျကမှ အမိနျ့ပေးတာ၊ ကြုပျစကားပဲ နားထောငျ တယျ။
လကျမနဲ့ ဒီလို သှားပွီးထိုးဘယျသူမှ နားမထောငျဘူးတဲ့ သူက ပွောပွနျရော ပွိုငျနတော အဲဒါကို ဒီလကျခလယျက အဲဒါကို ကွားပွီးတော့ အရမျးကို အမွငျကပျ တာနဲ့ သူလညျး ထပွီးတော့ ပွောတယျတဲ့ ငါ အရပျအရှညျ ဆုံးပါ ။အဲလိုပွောတော့ နောကျ တခြောငျး လကျသူကွှယျ -တိတျတိတျနေ စမျးတဲ့ ရတနာရှိတယျ ဆိုရငျ ငါကမှ စှပျရတာ ဘယျသူမှ မစှပျ ရဘူး သူကမှ တနျဖိုး ရှိတာတဲ့။
အဲဒါကို အငယျဆုံးဖွဈတဲ့ လကျသနျးလေးက လုံးဝ မခံခငျြဘူး အေး ဘုရားရှိခိုးရငျ ငါ ရှကေ့ နရေတယျတဲ့။အဲဒီလို မတှေးဘဲနဲ့ ဒီ. လကျ ခြောငျး စုပေါငျးပွီးတော့ဆုပျရငျ ဘယျလို အားရှိ တယျ ဒါလေး လကျငါးခြောငျးလုံး ကြောကျခဲတဈခဲကို ကိုငျပွီးတော့ အတူတူ အဝေးကို လှငျ့ပဈ ပေါ့နျော ။ုပေါငျး အငျအား လုပျရငျ ဘယျလောကျထိ ပဈနိုငျတယျ ဒါလေး ခေါငျးထဲမှာ ထညျ့ထားဖို့ ။
Credit_ Original Uploader
တရားထိုင်တာ , ဘုရားစာရွတ်တာ နဲ့ ဥပုသ်စောင့်တာ ဘယ်ဟာကပိုအကျိုးများလဲ
အောက်စဖို့ဒ် ဆရာတော် ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ “သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်များ (ဒု) (Buddha Brain for You and Me) ” တရားတော်မှ ကောက်နှုတ် မျှဝေ ပါသည်။
မေး ~ အရှင်ဘုရား တရားထိုင်လို့ ရတဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဘုရားစာရွတ် ဖတ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးတာ ၊ ဥပုသ်စောင့်တဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး စိတ်ငြိမ်း ချမ်းမှုကို ပိုရ နိုင်ပါ လဲ ဘုရား။
ဖြေ ~ ဘုန်းဘုန်းက အဲဒီလို မနှိုင်းယှဉ် တတ်ဘူး နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ ကြည့်တဲ့ အလေ့အထ လုပ်မထားဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းပဲ သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ ကြည့်တဲ့ ဟာမျိုး မလုပ် ဘူးပေါ့။အဲလို လုပ်မယ့် အစား complementary approach ဆိုတာ ဥပုသ်စောင့်တဲ့ ဟာနဲ့ တရား ထိုင် တဲ့ဟာ ဘယ်လို အပြန်အလှန် အကျိုးပြုတုန်း ဘုန်းဘုန်းက အဲလို တွေးတယ် တစ်ခုစီ ဘုန်းဘုန်းက မတွေး ဘူး။
မဂ္ဂင် ၈-ပါးကို ဘုန်းဘုန်း ဒါလေး ဆွဲပြ ချင်တယ် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အတွေးအခေါ်က ဒီထဲမှာ အကုန်ပါတယ် ဒီ ဓမ္မစကြာ ထဲမှာ အကုန် ပါတယ်
အဲဒီ စကြာက သူက အဲဒီ wheel လေ တစ်ခု တည်းပဲ ဒါပေမဲ့ – အဲတစ်ခု တည်းက အရည်အသွေး ဘယ်နှစ်ခုကို integrate လုပ် ထား တုန်း ပေါင်းစပ် ထားတုန်း ဆိုတော့ ၈ ခု ပေါင်းစပ် ထားတယ်။အဲတော့ သမီးက မေးတဲ့ အထဲမှာ ဥပုသ်စောင့်တာ နဲ့ တရားထိုင်တာ ဘယ် ဟာက ပိုကောင်းလဲ ဆိုတာ ဘုန်းဘုန်း အဲလို မတွေး တာက ဘုန်းဘုန်းက ဒီအတွေးတွေ အတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ် ကို train လုပ် ထားလို့။
ဥပုသ်စောင့် တာကို အကန့်တစ်ကန့် လို့ ဘုန်းဘုန်းက ယူဆ တယ် ဘုရားစာရွတ်တာကို အကန့်တကန့်လို့ ယူဆတယ် တရားထိုင် တာကို အကန့်တစ်ကန့် လို့ ယူဆ ထားတယ်။အဲလို အကန့်တွေ များလာရင် ကောင်းတဲ့အ ကန့်တွေ များလာရင် ဒီလူက သူဘာပဲ လုပ်လုပ် အကု န်လုံး အဲဒီ အရည်အသွေးတွေက အချင်းချင်း ဒီလို လက် ၅ – ချောင်းလို .. တချောင်း နဲ့ တချောင်း အထောက်အကူ ဖြစ်တယ်ပေါ့။
အဲ တော့ – ဥပုသ်စောင့်တဲ့ လူကလည်းပဲ သူရဲ့စိတ်ကို သူဆုံးမ တာပါပဲ , train လုပ်တာပါပဲ။
အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ နောက် music နဲ့ ပတ်သတ် တာတွေ အဲဒါ မျိုးတွေ သူ့စိတ်ကို သူ train လုပ်တယ် Destruction တွေ မများအောင် တရားထိုင်တဲ့ အခါလည်း ဒါပဲ လုပ်တာပဲ။စိတ်ထဲမှာ Destruction တွေ သိပ်ပြီးတော့ မများအောင် ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်း နိုင်အောင် လုပ်တာ ဒါကြောင့် ရည်ရွယ် ချက်ချင်း တူ တယ် ။ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်း အနေနဲ့ သမီးကို ဘယ်လို တွေးစေချင်း တုန်း ဆိုတော့ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ တွေးတာ ထက် ဘယ်ဟာက ဘယ်ဟာနဲ့ သူတို့ အချင်းချင်း အထောက်အကူ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ အဲဒါတွေး စေချင် တယ် ။
အဲဒီ approach ကို အင်္ဂလိပ်လို Integral Approach အရင်တုန်းကလေ – မင်းတုန်းမင်းခေတ် တုန်းက ဒါနက ပိုအရေးကြီး တယ် တချို့ပြောတာ တချို့ကပြော တယ် မဟုတ်ဘူး ။သီလက ပိုအရေးကြီးတယ် တချို့က ပြောတယ် တချို့က ဘာဝနာ ပိုအရေးကြီး တယ် ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင်က ဘာဝနာ တစ်ခုပဲ အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီးတော့ ဒါန နဲ့ သီလ ကို သူက ပယ်လိုက် တယ်။အဲဒါကို မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ဆရာတော်ကြီးက ပြန်ပြီးတော့ရေးပြီး မဟုတ်ဘူး ဒီသုံးခု ဘယ်လို အကျိုးပြုတယ် ဆိုတာ ပြန်ပြီးတော့ ရေးတယ် ။
ဗုဒ္ဓရဲ့အတွေးအခေါ် ဆိုလိုတာက ဗုဒ္ဓရဲ့အတွေးအခေါ်က အရည်အသွေးတွေ အများကြီး ရှိတဲ့နေရာမှာ အရည်အသွေးတစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ပြိုင်အောင် မလုပ်ဘဲနဲ့ အဲဒီ နည်းကို မရှာ ဘဲနဲ့ ။အဲဒီ အရည်အသွေးတွေ အားလုံး စုပေါင်းပြီးတဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ ဥပမာလေး တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင် လက်ငါးချောင်း သူတို့က ပြိုင်ကြ တယ်တဲ့။လက်မ သူက နုလုံးသားနဲ့ အနီးဆုံး ပဲတဲ့ ဒါကြောင့် သူက ပိုအရေးပါ တယ်တဲ့ လက်ညှိုးက – အဲဒါ မခံချင်ဘူး စကားများ မနေနဲ့တဲ့ အမိန့်ပေးရင် ကျုပ်ကမှ အမိန့်ပေးတာ၊ ကျုပ်စကားပဲ နားထောင် တယ်။
လက်မနဲ့ ဒီလို သွားပြီးထိုးဘယ်သူမှ နားမထောင်ဘူးတဲ့ သူက ပြောပြန်ရော ပြိုင်နေတာ အဲဒါကို ဒီလက်ခလယ်က အဲဒါကို ကြားပြီးတော့ အရမ်းကို အမြင်ကပ် တာနဲ့ သူလည်း ထပြီးတော့ ပြောတယ်တဲ့ ငါ အရပ်အရှည် ဆုံးပါ ။အဲလိုပြောတော့ နောက် တချောင်း လက်သူကြွယ် -တိတ်တိတ်နေ စမ်းတဲ့ ရတနာရှိတယ် ဆိုရင် ငါကမှ စွပ်ရတာ ဘယ်သူမှ မစွပ် ရဘူး သူကမှ တန်ဖိုး ရှိတာတဲ့။
အဲဒါကို အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်သန်းလေးက လုံးဝ မခံချင်ဘူး အေး ဘုရားရှိခိုးရင် ငါ ရှေ့က နေရတယ်တဲ့။အဲဒီလို မတွေးဘဲနဲ့ ဒီ. လက် ချောင်း စုပေါင်းပြီးတော့ဆုပ်ရင် ဘယ်လို အားရှိ တယ် ဒါလေး လက်ငါးချောင်းလုံး ကျောက်ခဲတစ်ခဲကို ကိုင်ပြီးတော့ အတူတူ အဝေးကို လွှင့်ပစ် ပေါ့နော် ။ုပေါင်း အင်အား လုပ်ရင် ဘယ်လောက်ထိ ပစ်နိုင်တယ် ဒါလေး ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ ။
22.April.2021 မှ 28.April.2021 အထိ တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီးမြား ဟောစာတမျး